Kwete nguva dzose, Pentagon inodzima chibvumirano cheJEDI neMicrosoft uye zvakare inokumbira zvikumbiro | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pechikamu chekupedzisira che2019 takagovana pano pablog nhau dzakanangana nekukakavara maitiro uye kusarudzwa kweanokunda purojekiti yezvivakwa zvebazi rePentagon reIT, rinonyanya kuzivikanwa seJEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) uye kambani inokunda pakati saka vazhinji vakaendesa zvirevo zvavo hapana mumwe kunze kweMicrosoft.
Haasi iye chete anokunda angave nekontrakiti yemakore gumi nePentagon, asi chibvumirano chaive chemabhiriyoni gumi emadhora, izvo zviri pachena kuti vazhinji vevatori vechikamu pakadzidza nezve "mhedzisiro" zvakakonzera kupesana pakati peAmazon, Microsoft, IBM, Oracle uye Google, uye zvakanaka vakuru vacho vaisada kudonhedza mubairo wemari uye kubatsira Pentagon kugadzira yakajairika gore gore mukati meDhipatimendi reDziviriro iro rinozofukidza matavi ese eUS Army.
Asi Sarudzo yekupa JEDI kuMicrosoft Pamberi peAmazon Yakakatyamadzwa zvinopfuura chimwe. Kune rimwe divi, AWS yaionekwa semutungamiriri mukugadzira gore masevhisi eCentral Intelligence Agency uye chechipiri nekuti Amazon yakanga yavimbiswa nechengetedzo rwepamusoro, nepo Microsoft ichinetseka kubata gore komputa.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti maitiro ehurongwa, ayo akatora nguva yakareba kwazvo kupfuura zvaitarisirwa, aivewo nehutongi kubva kuWhite House, sekuziva kwevazhinji, Mutungamiri Trump agara achiratidza kuvengana kwake naJeff Bezos, CEO.
Kuti Amazon yakafunga kumhan'arira Pentagon, sezvo kambani yakanzi "isina mubvunzo kusarangarira" kubva kuhurumende mukupa chibvumirano chakakura mumunda wehunyanzvi hwemauto kuMicrosoft.
Vazhinji vakarondedzera kuti yakasundirwa padivi kuAmazon uye Microsoft yaizopihwa sarudzo nekuda kwezvematongerwo enyika aTrump uye kuti nekuda kwekukakavadzana kwaakamboita kare naJeff Bezos iyi yaive mhando ye "chirango" cheMukuru weAmazon.
Uye ndeyekuti mwedzi yakawanda yaifanira kupfuura kuti sarudzo yePentagon ichinjwe kana kuti VaTrump vanga vachikurudzira maitiro ekuti chibvumirano chibviswe, kunyange hazvo zvisiri zvakajairika kuti vamiriri vehurumende vadzime zvibvumirano zvakatopihwa kare uye kuti gwara repamutemo riri kuenderera pamusoro pezvibvumirano izvi.
Chero chingave chikonzero chaicho chekudzima chibvumirano neMicrosoft, izvi zvinokonzeresa makwikwi atozivikanwa pakati pemakambani makuru maviri aya kuti awedzere, asi zvakare zvese zvinoratidza kuti Hurumende yeUnited States inoda kuti kuvandudzwa kweprojekti kutange izvo nekukurumidza uye inofarira kudzivirira kutarisana nedare rinogona kunonotsa chirongwa ichi kwemakore akati wandei.
"Chibvumirano ichi chaive chakakodzera uye chakanyatsoenderana neAWS uye yaive dhizaini yakanaka kwazvo," akadaro John Furrier, CEO weSiliconANGLE, uyo akabvunzurudza vanopfuura makumi maviri vemukati kubva kuCapitol Hill nezve chirongwa ichi. "Hapana mumwe mutengesi aigona zvehunyanzvi uye wese aizviziva." Zvisinei, Oracle neMicrosoft vakaita izvo zvakataurwa naFurrier se "smear Campaign", yakanangana ne "AWS isingakunde," akadaro.
"Kuendesa mberi iyi ichave nzira yekuchengetedza kumeso yeAWS kuti iwane mugove wayo, ipapo Dhipatimendi reDziviriro richapa chinhu chisina kukosha kune mumwe munhu," akadaro. "Multicloud haigoneke pamatanho ekucheka AI. "Munhu wese anoziva izvozvo."
Pakupedzisira, zvakaratidzwa kuti mukuzivisa kweDhipatimendi reDziviriro kunoratidza kuti, kubva ikozvino zvichienda mberi, vachatsvaga kuti makambani ese ari maviri atumire zvirevo zvitsva yemhinduro yekubatana, nekuti chete Microsoft neAmazon ndivo vanokwanisa kuzadzikisa zvinodiwa, saka isu tingangopedzisira taona kuti Amazon ndiyo ichave inobata chibvumirano chakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Izvo hazviite nguva dzose, iyo pentagon inokanzura chibvumirano chayo cheJEDI neMicrosoft uye zvakare inokumbira zvikumbiro
Izas Candil akadaro
Zvinorevei kuti "kwete nguva dzose"?
Zvinotaridzawo kuti hapana akagadzirisa mazwi echinyorwa chino nekuti vakadya mazwi.
Kushandiswa kwezviito zvenguva zvisingaenderane.
Pindura Izas Candil
Izvi zvinei chekuita nelinux?
Kuti pachiitiko chekuti kondirakiti yakapihwa kuAmazon, zvivakwa zvichave pasi peLinux, nepo parutivi rwaMicrosoft pane mukana wekuti ichave iri pasi peAzure (iyo inoshandisa Linux), kunyangwe zvisiri zvachose.